Izityalo ze-ea & apos; vs. zombies amaqhawe umdlalo wekhadi oqokelelweyo ufika kwizixhobo ze-android kunye ne-ios
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Izityalo ze-EA & apos; vs Zombies Heroes umdlalo wekhadi oqokelelweyo ufika kwizixhobo ze-Android kunye ne-iOS
Izityalo ze-EA & apos; vs Zombies Heroes umdlalo wekhadi oqokelelweyo ufika kwizixhobo ze-Android kunye ne-iOS
Imidlalo yePapCap, umphuhlisi wezininzi Izityalo kunye nezihloko zeZombies , kunye ne-EA basandula ukubhengeza ukuba umdlalo wabo wamakhadi ahlawulwayo ngokuchasene neZombies Heroes ngoku ziyafumaneka kwihlabathi liphela kumaqonga e-Android kunye ne-iOS.
Umdlalo wabhengezwa ekuqaleni eMarsh, kodwa umhla wokukhutshwa awuzange uqinisekiswe ngelo xesha. Iindaba ezimnandi ziqala namhlanje, abalandeli bezityalo ngokuchasene neZombies franchise abangabanini bezixhobo ze-Android kunye ne-iOS ngoku baya kuba nakho ukubamba umdlalo kwiGoogle Play okanye App Store.
Izityalo kunye neZombies Heroes ngumdlalo wekhadi oqokelelweyo ovumela abadlali ukuba bakhethe isityalo esinamandla amakhulu okanye iqhawe le-zombie, kunye nokuhlanganisa iqela eliza kulwa nabahlobo kunye neentshaba.
Kukho amakhulukhulu amakhadi ekufuneka eqokelelwe, aqulathe ukuthandwa Izityalo kunye nabalinganiswa beZombies , ke abadlali abazukuphumelela kwaye abanalo ixesha elinzima lokwakha iqela ukuze bathathe ibala lemidlalo kumdlalo wabadlali abaninzi okanye wabadlali abanobuhlobo.
Ngokomphuhlisi weMidlalo yePopCap, iiPlants vs. Zombies Heroes zongeza uninzi lwabalinganiswa abatsha, ngaphandle kwabo sele bedumile kwezinye imidlalo ezinje ngeZityalo ngokuchasene neZombies Garden Warfare. kunye nezakhono ezizodwa ezinokuthi zivumele abadlali ukuba benze isicwangciso sabo sokuphumelela kwaye badlale ngendlela abathanda ngayo.
Kodwa kukho iiapos ezininzi, njengoko iZityalo vs iiZombies Heroes zenza ukuba abadlali bazenze izityalo okanye iiZombi okokuqala kwiselfowuni, ngelixa bedlala umdlalo. Ngaphandle kwebala, abadlali banokuphonononga indalo ipvZ Heroes okoko umdlalo uza ne-epic single player adventure, kunye nemibuzo kunye nabaphathi abacelomngeni abaphosa imbuyekezo emangalisayo kwabo baboyisayo.
Izityalo vs Zombies Heroes izibonelelo ezivela kumdlalo odlalayo, ke uya kuba nakho ukudlala umdlalo kuso nasiphi na isixhobo kwaye ugcine inkqubela yakho.
umthombo: UbuGcisa boBugcisa
uqhagamshela njani ii-airpods ezingezizo
Iifitbit & apos; s Izivumelwano zoLwesihlanu oMnyama kwiVersa 2 smartwatch sele zikhona
Eyona meko ilungileyo ye-iPhone 12
I-Samsung Galaxy Qaphela 10+ vs Galaxy S10 +
Ezona zixhobo zekhamera zilungileyo ze-iOS ezikuvumela ukuba udubule i-RAW kwi-iPhone yakho 7, 7 Plus, SE, 6s okanye 6s Plus
Nantsi indlela yokufumana i-iPhone yakho engama-29 ebhetri endaweni ye-Apple
Nazi iiapos zendlela yokukhuphela i-Pokémon Yiya kwi-iOS yakho okanye isixhobo se-Android nokuba uhlala phi